Zvinorevei Kupemberera Zuva rePink Shirt - BullyingCanada
/ Zvazvinoreva Kupemberera Zuva rePink Shirt
MuNhau February 18, 2022
Vazhinji vekuCanada vanofunga nezveHalifax, Nova Scotia, senzvimbo yakanaka yekugara, uye yekushanyira, asi dunhu remugungwa ndiko zvakare. Pink Shirt Zuva- inozivikanwa pasi rose neChitatu chekupedzisira muna Kukadzi - yakatanga. Muna 2007, mudzidzi weGrade 9 akashungurudzwa nekutyisidzirwa paakauya kuzuva rake rekutanga kuchikoro chesekondari akapfeka shati yepink-hembe yaasina mubvunzo kuti akasarudza zuva rake guru risati rasvika.
Iwe unoziva kuti kutaura, "Kana iwe ukaona chimwe chinhu, taura chimwe chinhu?" Vadzidzi veGrade 12 David Shepherd naTravis Price vakacherechedza kudheerera. Asi vaviri vacho, pamwe chete neshamwari shoma shoma, vakaita zvinopfuura kungotaura chimwe chinhu. Ivo akaita chimwe chinhu.
Achishandisa zvainge zvakanangana nembavha sepfuti dzake dzemutsa, Shepherd akatsvaga 50 matangi epingi pachitoro cheko chekutengesa ndokutumira meseji kuvarume vaaidzidza navo kuti vasangane mufoya mangwana acho. Mangwanani akasvika uye pakati pemabhegi emabhuku nemalunchbox maive neplastic bag raShepherd raive rakazadzwa nematangi epink. Bhegi rakareruka semudzidzi mushure mekunge mudzidzi atora tangi kuti apfeke sechiratidzo chekutsigira uye kubatana. Mukomana aidheerera akasvika, akabata uye kunyevenuka achiona shamwari dzake. Vanodheerera? Nyaya yacho inoti, maererano naPrice, “havana kuzombonzwika zvakare.”
Iyi yekukurumidza kufunga, kuita-zvakanaka chirongwa chakawedzera kupfuura mangwanani iwayo muna 2007, uye kupfuura Halifax uye kunyange Canada. Nyika dzakaita seNew Zealand, China, Panama, Japan uye dzakawanda dzinotora chikamu muPink Shirt Day gore rega rega kutsigira nekusimudzira ruzivo rwepasi rine mutsa, rinosanganisirwa.
Kupfeka hembe yako yepink kamwe pagore kwakanaka. Asi kuva mubatsiri chinhu chinoda kudzidziswa zuva nezuva.
Maererano ne BullyingCanada, rubatsiro rwevana, vabereki nevadzidzisi, mudzidzi mumwe chete pavatatu akataura kuti akadheererwa. Zvimwe zvidzidzo zvinopa mufananidzo wakatonyanya kusiririsa: Kudheerera kunoitika kamwe pamaminetsi manomwe ega ega panzvimbo yekutamba. Uye pasi pevadzidzisi vakarinda maziso? Mukirasi, zvinoitika kamwechete pamaminitsi makumi maviri nemashanu. Pazviitiko izvozvo, ruzhinji rwekudheerera runomira mukati memasekondi gumi apo vezera vanopindira.